Assistants obulala izinzwa Job Description / Isibopho Sample Futhi Izindima - JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Assistants obulala izinzwa Job Description / Isibopho Sample Futhi Izindima
Assistants obulala izinzwa Job Description / Isibopho Sample Futhi Izindima
UJakobe Juni 28, 2016 Ukukhangisa Shiya amazwana 808 Ukubukwa
Ukusiza izinzwa ngaphakathi imisebenzi ngokusungula indlela yokubulala izinzwa mayelana amasu okuhlinza kanye nonsurgical. Bagcine idumela nesineke kanye supply lokunakekelwa isiguli ngesikhathi inqubo yokuhlinza.
Hlola okukhethwa kukho imikhiqizo amakamelo asebenza, nemithi, bese kuthi amagesi.
Yiba nengxenye ezifundweni, seminar, bona noma baphishekele izinto ezingeziwe professional ugcina ukubuyekezwa emisha e izinzwa.
Nikeza ukuphathwa ukuhlinzwa umgudu kuhlanganise tracheal intubation noma isevisi.
Ongakwenza Lapho izimo eziphuthumayo ngokunikeza yokusiza umuntu ukuba aphefumule cardiopulmonary (CPR), inhliziyo eliyisisekelo yini nokusekela ukuphila kwakhe (BLS), eziphambili inhliziyo lifesupport (U-ACLS), noma ezingane eziphambili esisekela ukuphila (ABANGANI).
Ngokwengqondo kwangaphambi kokuhlolwa futhi sishintshe izindlela lokuthumela izinzwa namawashi.
Ukunikeza kokuqondisa, yokufundisa emtholampilo noma coaching kubasebenzi ezindaweni ezifana ngokwesibonelo izinzwa imikhuba.
Qoqa izilingo noma izinhlobo Ukuhlolwa okungukuthi ukuhlaziywa.
Qoqa bese ubika clientsA pre- osekwadlula impilo.
Zigade futhi zibike individualsI kusengaphambili ngesikhathi ukuhambisa-izinzwa.
Qondisa izinzwa e ukuqapha abantu kuhlanganise electrocardiogram (EKG), ingcindezi lwemithambo oqondile, central ingcindezi emithambo yegazi, lwemithambo igesi igazi, hematocrit, noma incazelo isimiso ukushisa, kwezimila, umzimba wegazi nokushaya kwenhliziyo-rate.
Ukusiza supply of eyinkimbinkimbi amasu esisekela ukuphila kuhlanganise lokhu kwelashwa sisebenzisa naphakathi noma ephezulu imvamisa ukupholisa -arterial cardio imishini ukwesekwa.
Ngokwenza izindlela izinzwa ezifana ngokwesibonelo umgogodla futhi ukwelashwa epidural ukusiza izinzwa,.
Siza ngengqikithi ayisebenzisa amasu kokulandela ezifana wamaphaphu Umthambo catheterization uphenyo Spectral nekhono.
Enza umzimba, izimpahla igazi, noma uketshezi abaqotho.
Phatha amazinga izinzwa phakathi izindlela.
ikhiphe imithi ebulala izinzwa , adjuvant, noma imithi imishini ngaphansi inkambo ongudokotela obulala izinzwa.
Ukufunda Isifundo sokuqondisisa-Sivisiso temisho wabhalwa amadokhumenti umsebenzi ezihlobene.
Active-Ukulalela-NEKWETFULA ukuqaphela yonke yalokho abanye abantu bathini, kokuba isikhathi ukuqaphela izinto lakhiwa, nezindaba ngizibuza okwathiwa ifanele, hhayi mesmerizing ngezinye izikhathi okungalungile.
Ukwenza-uxoxa ebhaliwe ngempumelelo phansi njengoba afanele nezidingo zezilaleli.
Ukuxoxa-Ukukhuluma nabanye ukubalula amaqiniso ngempumelelo.
Arithmetic-Isebenzisa izibalo ukulungisa izinkinga.
Isayensi-Ukusebenzisa amasu kanye nemihlahlandlela yesayensi ukuxazulula ubunzima.
Ezibucayi ukwahlulela Kucabanga-Lisebenzisa nokucabangisisa ukuqaphela ubuthakathaka nowamathalenta izindlela, imibono noma izimpendulo enye ukuze izinkinga.
Active-Learning-Ukwazi lokho okushiwo imininingwane emisha kokubili esizayo nokuxazulula izinkinga kanye izinqumo ekhona.
Ukufunda Strategies-Isebenzisa ngitsatse imikhuba teachingORtutorial nezinqubo esifanele isimo lapho ufunda noma ibayala izinto fresh.
Ihlola-Ihlola / Ukubheka ukusebenza ngokwakho, abantu abengeziwe, noma izinhlangano cabangela izinyathelo zokulungisa noma ukudala izithuthukisi.
Komphakathi Perceptiveness-Ekwazini othersI ukuthambekela nokuqonda ukuthi kungani enza ngendlela benza.
Dexterity Esishintsha netento ngekwemagugu ukuziphatha othersI.
Ukuthonya-Begging abanye ukushintsha izenzo noma izingqondo zabo.
Settlement-Ukuthola abanye ndawonye nokuzama buyisana ukuhlukahluka.
Ukuqeqeshwa-Coaching abanye indlela ncamashi ukwenza okuthile.
Inkampani Orientation-Ngezenzo efuna izindlela ukunika amandla abantu.
Inxanxathela okuxazulula izinkinga Ukuthola izinkinga eziyinkimbinkimbi futhi critiquing Imininingwane exhumene cabangela futhi ukukhiqiza izindlela kanye nokuqalisa amakhambi.
Operations Ukuhlaziya-eliHlolako lento Ukucaciswa nezimfuneko ukwenza isendlalelo.
Engineering Design-Ukuqondanisa amathuluzi noma ukwenza engineering ukunikela ukuswela ngabanye.
amathuluzi kanye uhlobo imishini sika esidingekayo sokwenza umsebenzi Izinsiza kusebenza Ukukhethwa-Ukunquma.
Isitolimende-Ukufaka wiring, imikhiqizo, amathuluzi, noma amaphakheji ngokuvamile nezimfuneko.
Coding-Kokuqamba program e-computer ekusebenziseni ukuthi baningi.
Ukusebenza Tracking zokubuka dials izinkomba, noma ezengeziwe amasignali amasignali ukuqinisekisa umshini lisebenza kahle.
Ukusebenza nesibambo-nokusingatha imisebenzi amadivayisi noma amasu.
Isisetshenziswa Isondlo-Kwenziwa isevisi isimiso kumadivayisi nokubona lapho.
Ukuxazulula-Inquma izizathu ukulawula amaphutha bese ukhetha indlela ukuqhubeka nanoma-ke.
Ukubeka-Balungisa izinhlelo noma imikhiqizo sisebenzisa izinto ezidingekayo.
Quality Control Examination-
Vakaza futhi Decisionmaking-Ecabangela inkululeko izindleko jikelele kanye nezinzuzo yezenzo ukuthi kukhona abazoba ukuthola lowo lifaneleka kakhulu.
Systems Ukuhlaziya-Ukunquma indlela inqubo kumele enze nendlela izinguquko imisebenzi, izifo, futhi imvelo kungathinta imiphumela.
Izindlela Ukuhlolwa-Inquma izenzo noma izimpawu ukusebenza uhlelo nangokuhambisana nemigomo umshini, izinyathelo ezidingekayo ukuze uqinise noma ukusebenza kwesokudla.
Isikhathi Ukuphathwa-Ukulawula abanye’ isikhathi futhi isikhashana komuntu siqu.
Ukugada Imali-Icacisa indlela zamadola izosetshenziswa ibe msebenzi wafeza, futhi yokuthengisa mayelana lezi zindleko.
Ukugada Mkhiqizo Izindlela-Ukuthola nokubona maqondana ukusetshenziswa ezifanele imishini, izindawo, kanye nemikhiqizo ezidingekayo sina ukwenza umsebenzi othile.
Ukugada Yezisebenzi Resources-Esishukumisayo, isakhiwo, futhi eqondisa abantu njengoba ukusebenza, ukuhlukanisa abantu ngempumelelo kakhulu umsebenzi.
Diploma High-School (noma kukaGedaliya noma High-School kwefrakshini Izitifiketi)
Ukuphathwa Komsebenzi Amakhono Okudingeka
ukuphikelela – 88.41%
Cooperation – 93.33%
Worry mayelana Abanye – 94.13%
Positioning Cultural – 89.13%
Ukuzithiba – 94.18%
ukucindezeleka IThreshold ungayifaka – 98.40%
ukwethembeka – 96.40%
Gxila Ukujula – 99.60%
Yokuziphatha – 97.00%
Ukuthuthukiswa – 87.17%
Analytical Ukucabanga – 90.63%